ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): Harmony Of Head And Heart
၂၀၀၂ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်တုန်းကပါဘဲ။ ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးခါစ အလုပ်အကိုင် မယ်မယ်ရရ မရှိတဲ့ အချိန်တွေတုန်းကပေါ့။ တစ်နေ့မြို့ မအားကစားကွင်းက စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်သွားတော့ အဲဒီမှာ ဆရာမိုးဟိန်း (သားဂျာနယ်ကျော်) ရဲ့ကဗျာစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို တွေ့ တယ်။ ၀ယ်မလားစိတ်ကူးပြီးကြည့်လိုက်တော့5USD ဆိုဘဲ။ အဲဒါနှင့် ဟိုလှန်ဒီလှန် ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်ပြီး ပြန်ချထားခဲ့ လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီခဏလေး ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်လိုက်တာမှာ ဒီစာအုပ်လေးကောင်းမှန်းတော့ သိသွားတယ်။ တော်တော်လည်း လိုချင်သွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမပေါ် ဟိုငေးဒီငေးနှင့် လမ်းလျှောက်သွားရင်း လမ်းဘေး စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဆရာမိုးဟိန်းစာအုပ်လေးကို အမှတ်မထင်တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ သေချာအောင် စာအုပ်ကို အစအဆုံး လှန်လှောဖတ်ပြီး အရင်စာအုပ်ပြပွဲမှာတုန်းက တွေ့ ခဲ့တာနှင့်တူ မတူစစ်ကြည့်လိုက်တော့ အားလုံးကွက်တိပါဘဲ။ ဒါနဲ့ ဈေးနှုန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ကြိုက်တာယူ ၅၀၀ကျပ်ဆိုတဲ့ အပုံထဲက ဖြစ်နေတာနှင့် ကျွန်တော်လည်း မဆိုင်းမတွဘဲ မြန်မာငွေ ၅၀၀ကျပ်တိတိကို ဆိုင်ရှင်ကိုပေးပြီး စာအုပ်လေးကို မ, လာခဲ့ပါတော့တယ်။ စာအုပ်က အဟောင်းဆိုတော့ နည်းနည်းလေး အရောင်မတောက်၊ စက္ကူတွေ တစ်ရွက်စ နှစ်ရွက်စ ပြဲနေတာကလွဲလို့အတွင်းစာသားတွေကတော့ အားလုံးအပျက်အစီးမရှိ အကောင်းပကတိပါဘဲ။
ပါဝင်တဲ့ ကဗျာအားလုံးဟာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးဖွဲ့ ထားတဲ့ ကဗျာတွေချည်းဖြစ်ပြီး အနက်အဓိပ္ပါယ်၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း နှင့် ကာရံ အယူအဆတွေဟာ ဖတ်ရတဲ့သူရဲ့ စိတ်ကို ကဗျာအစမှ အဆုံးတိုင်အောင် ဖမ်းစားနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်ဖတ်ပြီးသွားတိုင်း တွေးစရာတွေ တသီတတန်းကြီး ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို အွန်လိုင်းမှာရှာကြည့်တော့မတွေ့ တာနှင့် အခု မြန်မာပြည်ကနေ တကူးတကပြန်မှာပြီး ကိုယ်နှင့် အကြိုက်တူမယ့်သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပို့ စ်အနေနှင့် တင်ပေးသွားမယ်စိတ်ကူးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ် စာပေပညာရှင် အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ရဲ့မြန်မာဆန်ပြီး ဓမ္မအတွေးပုံရိပ်တွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာလက်ရာများကို မြည်းစမ်းကြည့်ကြပါအုံးနော်။
as two images, blurred, appear.
When their little bud has bloomed
and foundaplace on the stand,
away they are in that silent land.
But the kindly winds
will carry its scent
for the heads to see and hearts to feel
this soothing flower.
Roll back tears, roll back!
For now, I feel,asmile dawns,
faint but firm.
"Tree" will grow, yes, shall grow
but weeping and smiling
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:33 AM